Angletera hanainga ny fetra COVID-19 rehetra amin'ny 19 Jolay na eo aza ny fitomboan'ny tranga vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Angletera hanainga ny fetra COVID-19 rehetra amin'ny 19 Jolay na eo aza ny fitomboan'ny tranga vaovao
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Rehefa nesorina ny fameperana, tsy hitaky ny governemanta hiasa an-trano intsony ny governemanta ary hajanona ny fetra amin'ny isan'ny olona mahazo mitsidika trano fikarakarana.
Tsy ilaina intsony ny saron-tarehy amin'ny fitateram-bahoaka.
Hisokatra indray ireo trano fandihizana any Angletera.
Hofoanana ny fetran'ny haben'ny vondrona ao an-tranon'olona manokana ho an'ny olona enina.
Nanambara izany ny praiminisitra anglisy Boris Johnson Angletera dia hampidina ny ankamaroan'ny sisin-dàlana COVID-19 sisa tavela, ao anatin'izany ny fetra ara-dalàna rehetra amin'ny 19 Jolay. Nanao ny fanambarana ny praiminisitra na dia teo aza ny fitomboan'ny trangana virus coronavirus vaovao ary ny fanantenana ny fahafatesan'ity virus ity.
Tsy takiana amin'ny sarety fitateram-bahoaka intsony ny saron-tarehy, hosokafana ny clubclub ary ny fetran'ny haben'ny vondrona olona enina dia hofoanana daholo, hoy i Johnson tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety.
Hifarana ihany koa ny fetra hafa amin'ny isan'ny olona amin'ny fampakaram-bady sy amin'ny fandevenana, toy izany koa ny fepetra takiana amin'ny fanalavirana ny fiaraha-monina sy ny famerana ny bara sy trano fisakafoanana amin'ny serivisy latabatra ihany.
Nilaza i Johnson fa mbola nahita ny fiakaran'ny aretina COVID-19 sy ny fidiran'ny hopitaly i England, ary nampitandrina fa mety hisy tranga 50,000 19 isan'andro isan'andro amin'ny XNUMX Jolay.
"Tokony hampifanaraka ny alahelontsika amin'ny fahafatesan'ny COVID isika," hoy izy, ary nilaza fa ny governemanta dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra "mitandrina sy mifandanja" amin'ny fameperana.
Nilaza i Johnson fa manantena izy fa afaka manafoana ny ankamaroan'ny fameperana sisa tavela amin'ny 19 Jolay, miaraka amin'ny famerenana ny angon-drakitra momba ny fahasalamana farany natao ny 12 Jolay.
Ny rafitra fitsapana nasionaly, ny fanarahana ary ny fitokana-monina dia mbola hiasa manomboka ny 19 Jolay, hoy i Johnson, na dia eo aza ny fandinihana ataon'ny governemanta ho an'ny olona vita vaksiny tanteraka sy ho an'ny ankizy. Tsy maintsy mitokantokana ny olona raha manaporofo fa mitondra ny otrikaretina izy na voabaiko ny hakan'ny NHS Test sy ny Trace.